Ciidamadda Soomaaliya oo weerar gaadmo ah ku dilay xubno Al-Shabaab ah
Ciidamadda oo weerar gaadmo ah ku dilay xubno Al-Shabaab ah
Cagajoof ayaa ka gaabsaday in uu carabaabo waxyeeladda soo gaarey ciidanka dowladda ee uu xusay in ay qaadeen howlgalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – In ka badan 20 kamid ahaa Al-Shabaab ayaa lagu dilay kadib markii ay ciidamadda Soomaaliya howlgal ka fuliyaan gobolka bartamaha dalka dhaca ee Hiiraan, sidda ay shaaciyeen saraakiisha.
Maxamed Nuur Cagajoof, duqa magaaladda Jalalaqsi, ayaa u sheegay warbaahinta in howlgalka laga sameeyay inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buula Burde, isla markaaa ay halkooda kasii wadi doonan.
"Waxaan kaloo kasoo furanay 18 qori iyo rasaas," ayuu Cagajoof u sheegay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da.
Howlgalka ayaa yimid markii ay Al-Shabaab weeraro kala duwan ka gulisay gobolkaas ayna beegsatay ciidanka dowladda iyo saaxiibadooda caalamiga ah ee AMISOM, ayuu hoosta ka xariiqay.
Marka laga soo tago sheegashadda duqa, ma jiro wax war ah oo ku saabsan gulufkan oo kasoo baxay dhanka Al-Shabaab, illaa iyo hadda.
Madaxweynaha HirShabelle, Maxamed Cabdi Waare, ayaa mar sii horeysay wuxuu waydiistay dowladda federaalka in laga taageero baacsiga xoogaga gacansaarka la leh shabakadda argagixisadda ah ee Al-Qaacida.
Bishaan October 7-deeda ayay ahayd markii duleedka degaanka Cabdi Biroole ee gobolka Jubadda Hoose lagu khaarijiyey 20 kamid ahaa Al-Shabaab markii ay howlgal sameeyeen ciidamadda Jubbaland.
Shaqsi qarax ku xiray sideed gaari oo maxkamad lagu soo taagay Muqdisho
Soomaliya 20.07.2020. 16:00
Eedeysanaha ayaa horey shan sano oo xabsi ah loogu xukumay isla kiiskaan noocaan oo kale ah.
Soomaliya 25.03.2020. 16:05
Saraakiil loo xiray maxaabiistii ka baxsatay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho
Soomaliya 01.01.2020. 16:35
Sidda warbaahinta caalamka uga falcelisay is-miidaaminta Muqdisho
Soomaliya 28.12.2019. 14:00
A-Shabaab oo weerar ku qaadey saldhiga ciidamadda Soomaaliya
Soomaliya 05.08.2020. 15:30